Al-Shabaab oo furatay twitter cusub - BBC Somali - Warar
Al-Shabaab oo furatay twitter cusub
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Febraayo, 2013, 13:37 GMT 16:37 SGA
al-Shabaab waxa laga saaray magaalooyin badan 18 bilood ee u dambeeyay
Kooxda Islaamiga ee al-Shabaab ayaa waxa ay furatay bog cusub oo Twitter ah, wax ka yar laba toddobaad markii laga xiray boggii ay ku lahaayeen twitter ee HMSPress.
Sarkaal sare oo ka tirsan al-Shabaab ayaa BBC u sheegay in boggan cusub ee ay fureen uu yahay mid rasmi ah, waxaana cinwaankiisu yahay HSMPress1.
Bogga al-Shabaab ee twitter-ka ayaa la xiray kadib markii kooxdu ay ku hanjabtay in ay dileyso qof Faransiis ah oo ah heysteen, ayna sidaa sameeyeen.
Shuruucda u degsan Twitter ayaa dhigaya in ay mamnuuc ka tahay hanjabaad iyo dagaal.
Dadka indha indheeya siyaadda ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay muddaba dooneysay in al-Shabaab laga xiro boggaasi ay ku lahaayeen Twitter laakiin ay la'ayd sidii ay sharciyan arrintaasi ugu qasbi lahayd shirkadda.
Al-Shabab ayaa waxa 18 bilood ee u dambeeyay laga saarayay magaalooyinka ugu waaweyn dalka oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho oo ay in badan ka heysteen, markii dambena isaga baxeen.